पुरुषको एक हप्तामा आउने शुक्रकिटले विश्वका सबै महिला गर्भवती हुने यस्तो छ रोचक तथ्यहरु ! Arthadaily: Search for truth and fact.
प्रकाशित: २०७६-८-२६ गते
महिलाको स्तनको आकार २५ प्रतिशतले बढ्छ । महिलाको स्तन बढ्नुको कारण तल बुद्धा बनाएर दिएको हो । जान्नुहोस् बिन महिलाको स्तन बढ्छ । यस सम्बन्धी २२ टिप्णी लेखिएको छ ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै चरमसुख भएको रेकर्ड एक महिलालाई एक घण्टामा १३४ पटक भएको छ भने पुरुषमा १६ पटक भएको पाइएको छ । सम्भोगप्रतिको निष्क्रियताले लिंगको आकार पनि घटाउँछ । रुसकी महिला तात्याना कोजेभ्निकोभाले योनिले केजी तौल तानेर रेकर्ड बनाएकी थिइन् । वीर्यमा भएको प्रोटिनले चाउरी निको पार्छ विश्वभरमा ग्रिसमा मानिसहरु सबैभन्दा सेक्सीमा पर्छन् । उनीहरु अधिकांशले हप्तामा एकपटक सम्भोग गर्ने गर्छन् ।
विश्वमा दैनिक १ करोड सम्भोग हुन्छन् । तपाईंले यो शब्द पढिरहँदा ६५ हजार दम्पत्तीहरु सम्भोग गरिरहेका हुन्छन् । एक चम्चा वीर्यमा सात क्यालोरी हुन्छ । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले घरमा श्रीमतीलाई सहयोग गर्ने पुरुषहरुले ५० प्रतिशत बढी सम्भोगको अवसर पाउने पत्ता लगाएका छन् । मूर्ति या म्यान्निक्विनप्रति हुने सम्भोग आकर्षणलाई एजाल्माटोफिलिया भनिन्छ ।
५० जनामध्ये एक महिलामा अतिरिक्त स्तनको निप्पल हुने गर्छ । अहिले विश्वभर प्रचलित खाद्यपदार्थ केलोग्स कर्नफ्लेक्स एक त्यस्ता व्यक्तिले विकास गरेका थिए, जो हस्तमैथुनविरुद्धका अभियन्ता थिए । उनले मानिसबाट सम्भोग विचार हटाउँन स्वस्थ खाना आवश्यक रहेको भन्दै कर्नफ्लेक्सको विकास गरेका थिए । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट के देखाएको छ भने स्पेन, ब्राजिल र इटालीका महिलाहरुले उत्कृष्ट लभर उत्पादन गर्छन् । अंग्रेजहरु भने ज्यादै अल्छी हुन्छन् । प्राचिन चीनमा सम्भोगपछि मक्र्युरी र सिसा खाएमा गर्भ रहँदैंन भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो । तर, यसले मृत्युसम्म निम्त्याउथ्यो ।
सम्भोग गरेलगत्तै पिसाब फेर्न गाह्रो हुन्छ र पिसाब निकाल्नै कठीन हुन्छ । यसको कारण छ । किनकी सम्भोगका बेला सरीरमा एन्टी ड्युरेटिक अर्थात् पिसाब प्रतिरोधी हर्मोन निस्किएको हुन्छ जसले पिसाबको प्रवाह रोकिदिएको हुन्छ । त्यसको असर सम्भोगको सत्र सकिएको केही समयसम्म पनि रहिरहनछ । सम्भोगका बेला पूरै चरम आनन्द प्राप्त भएको क्षणमा महिलाको स्तनको आकार सामान्य भन्दा २५ प्रतिशत सम्मले बढ्ने गर्दछ । दुईवटा कण्डम लगाउँदैंमा थप सुरक्षा दिने भन्ने हुँदैंन, बरु आपसी घर्षणले फुट्न सक्छ । इरानमा वेश्यावृत्ति कानुनी छ, जहाँ पैसा तिरेर केही घण्टाका लागि अस्थायी श्रीमती पाइन्छ ।
एक स्वस्थ पुरुषले एक हप्तामा यति धेरै शुक्रकिट स्लन गर्न सक्छ की त्यसले विश्वका सबै महिलालाई गर्भाधारण गर्न पुग्छ । पुरुषको विर्य बाहिर निस्किएसँगै विर्यमा रहेका शुक्रकिट बाहिरी वातावरणमा केही सम्म मात्र बाँच्न सक्छन् तर यदि विर्य महिलाको यौनीभित्र प्रवेश गर्यो भने तीन देखि पाँच दिनसम्म बाँच्न सक्छन् । पुरुषको दुईवटा अण्डकोषमध्ये एउटा अलि तलतिर रहेको हुन्छ । यसको कारण हो– हिड्दा तिनीहरु आपसमा नठोक्किउन् । सन् २०१२ मा भएको एक सर्भेले ६० प्रतिशत बेलायतीहरु अध्याँरोमा सम्भोग गर्न मन पराउँने देखाएको थियो ।
जति नै आर्कषक भए पनि घरमा कहिल्यै नल्याउनुस् यी ३ तस्बिर!